Lehiben’ny Faritra Androy : Nanavotra fianakaviana maro ny tetikasa Fiavota nentin’ny Filoha -
AccueilSosialyLehiben’ny Faritra Androy : Nanavotra fianakaviana maro ny tetikasa Fiavota nentin’ny Filoha
23/06/2018 admintriatra Sosialy 0
Fianakaviana maro no afa-pahasahiranana noho ny fahazoana ilay vola fanampiana avy tamin’ilay tetikasa « Fiavota » nentin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampiana ho an’ny Faritra Androy. Mbola haharitra hatramin’ny 2 taona ny fanatanterahana azy io any an-toerana. “ Efa hita sahady ny fiantraikany fa tena nampiova ho tsara kokoa ny fari-piainan’ireo tokantrano sahirana”, hoy ny kolonely Michaël Randrianirina lehiben’ny Faritra Androy.
Notsipihiny fa isan’ireo faritra tsy mba nisy fitakiana na fanoherana ny fitondrana foibe ny Faritra Androy. Nahatsapa ny olona fa maro ny tetikasa nitondra fampandrosoana nentin’ny Filoha tany an-toerana.
Mikasika ny fetim-pirenena kosa indray, dia makotroka ny fanamarihana ny faha-58 taonan’ny fahaleovantena any an-toeana. Ny andron’ny 26 jona 2018 mantsy, dia hisy ny fampisehoana goavana hataon’ny tarika Onja Tinondia ao amin’ny kianjan’Ampihamy. Tanjona amin’izany moa ny hampifalifaliana ny vahoaka noho ny fetin’ny asaramanitra.
Mikasika izay fetin’ny Asaramanitra izay indrindra dia tokony hajain’ireo mpanao politika ny fitoniana raha tena milaza ho tia tanindrazana marina izy ireo.